यदि महिला गर्भवती हुन नसकेमा को बढि जिम्मेवार? जान्नुहोस् उत्तर… - Dainik Nepal
यदि महिला गर्भवती हुन नसकेमा को बढि जिम्मेवार? जान्नुहोस् उत्तर…
दैनिक नेपाल २०७४ कार्तिक २३ गते १५:५८
एजेन्सी । महिलाहरुमा हर्मोनल परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु आउँछन् । जसमा बाँझोपना (Infertility) एक प्रमुख समस्या हो । यो समस्यासँग सम्बन्धीत कतिपय यस्ता कुराहरु छन् जुन महिला र पुरुष दुवैलाई ज्ञान हुन आवश्यक छ । गाइनोकोलोजिस्ट (Gynecologists)हरुका अनुसार यसमा महिला वा पुरुष कोही पनि जिम्मेवार हुन सक्छन् ।
यदि महिला गर्भवती हुन सकिरहेकी छैनन् भने त्यसमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवार को हुन्छ?
यदि महिला गर्भवती हुन सकिरहेकी छैनन् भने यसमा महिला मात्रै नभई पुरुष पनि जिम्मेवार हुन सक्छन् । महिलाहरु गर्भवती हुन नसक्नुमा पोलीसिस्टिक ओभेरियन डिजिज (Polycystic ovarian disease, PCOD) प्रमुख कारण हो । यो समस्या महिलाहरुमा हर्मोनको परिवर्तनका कारण हुने गर्दछ । यो समस्या हुँदा महिलाहरुको डिम्भासयमा सिस्ट (Cyst) अर्थात गिर्खा बन्न थाल्छ । त्यस्तै पुरुषहरुमा स्पर्म काउन्ट अर्थात बीर्यमा शुक्रटिकको मात्रा कम हुनु तथा शुक्रकिटको गतिमा ह्रास आउनु बाँझोपनाको कारण हुनसक्छ । यी दुबै समस्याको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ ।
प्रजनन क्षमता बढाउन के गर्ने?
महिलाहरुको प्रजनन क्षमता बढाउनको लागि उनीहरुको खानामा बढिभन्दा बढि बदाम, केरा, अण्डा, नट्स सीड्स तथा ओटमिल जस्ता कुरा सामेल हुनपर्छ । यसले महिलाहरुको प्रजनन क्षमता बढाउँछ ।
के महिनावारी रोकिएमा गर्भवती भएको मानिन्छ?
महिनावारी रोकिँदैमा गर्भवती भएको भन्न मिल्दैन । कतिपय समयमा बढ्दो उमेरका कारण हर्मोनमा परिवर्तन आउनु, लगातार तनावमा रहनु, थाइरोइडको समस्या हुनु, मधुमेह हुनु, गर्भ निरोधक चक्कीको धेरै प्रयोग गर्नु, मोटोपना, बढि कसरत गर्नु, वा पोलीसिस्टिक ओभेरियन डिजिज जस्ता कारणले पनि महिनावारी रोकिन सक्छ ।
यस्ता छन् तुलसी सेवनको चमत्कारिक फाइदा